Aogositra 3, 2018 Admin
Tompon'ny NYSE nandefa Bakkt crypto fifanakalozana & ponja vahaolana
Bitcoin mety ho eo amoron-tevan'ny fandravana toy ny mahazatra amin'ny alalan'ny vola. Raha kely indrindra dia izany no tanjona iray izay tsy ho ela startup ho natomboky ny iray amin'ireo mahery indrindra mpitendry Wall Street, amin'ny manampy amin'ny sasany ny mpitarika Amerika anisan'izany ireo orinasa Microsoft sy Starbucks (izay mikasa ny hampiasa ny sehatra vaovao hanaiky BTC vola.) Io maraina io ny Intercontinental Exchange-ny-barotra colossus izay tompon'ny New York Stock Exchange sy ny hafa maneran-tsena dia nanambara fa ny fananganana orinasa vaovao antsoina hoe Bakkt.
Barotra vaovao, izay antenaina ny hanomboka ny volana Novambra, manatitra federally nifehy tsena for Bitcoin. Noho ny famoronana ny Bakkt, ICE dia mikendry ny hanova Bitcoin ho atokisana manerantany vola amin'ny fampiasana malalaka. Filaza mandidin 'ny nanorenana Bakkt dia ny hanao Bitcoin ny feo sy ny fanatitra noho ny fototra azo antoka fa ankehitriny ny ankamaroany mpifidy hanalavitra azy io manerana izao tontolo izao-ny andrim-panjakana ara-bola goavana. Ny tanjona dia ny hanadio ny lalana ho lehibe mpitantana mba hanolotra vola Bitcoin fifanoloran vola, vola fisotroan-dronono, ary ETFs, tahaka ny tena nifehy, mahazatra ny fampiasam-bola.
Data Analytics tatitra hentitra “raharaham-barotra sarobidy” ny blockchain ho tonga $ 2T amin'ny 2030
IHS Market, ny angon-drakitra fintech Analytics mafy, tamin'ny volana Jolay dia nitatitra ny forecast ny blockchain teknolojia mitarika ho amin'ny “raharaham-barotra zava-dehibe ny asa atao” ny $2 tapitrisa tapitrisa ny 2030. The tatitra dia ahitana izay rehetra sarobidy manampy blockchain iray manontolo ho toy mijidina (Tsy vola madinika manokana tsena satroka). Na ny tatitra delved ho granular faritra blockchain sarobidy, anisan'izany ny "... Kilonga fikarohana stratejika blockchain dinidinika amin'ny manam-pahaizana manokana," $2 tapitrisa tapitrisa Toa ho mpandala ny mahazatra toy ny taona maro 2030 dia lavitra, koa nandritra ny 2017 omby hazakazaka, asa eny an-tsena dia tonga akaiky mahatratra $1 tapitrisa tapitrisa.
Fanampin'izany, fangatahana blockchain no mitombo. Anisan'izany ny mitohy sy ny fiaraha-miasa patanty frenzy amin'ny raharaham-barotra manerana efa ho sehatra ny raharaha rehetra. Ny fitomboan'ny boky ny Patents dia famantarana ny fananganan-jaza eo amin'ny toeram-piasana lehibe raharaham-barotra.
Araka ny tatitra, sehatra manan-danja mitondra fiara blockchain sarobidy raharaham-barotra dia ahitana:
Banky sy ny andrim-panjakana ara-bola
Supply rojo sy ny fitaovana mpamatsy
Dokam-barotra sy ny fampahalalam-baovao ny orinasa
Governemanta sy ny vahoaka-sehatry ny andrim-panjakana
Hery sy angovo orinasa
Antsinjarany sy ny e-varotra
Software manam-pahaizana manokana sy ny mpandraharaha
Telecom mpandraharaha sy ny MNOs
Patents mahaliana mbola tsy manam-paharoa hanolotra fangatahana ny teknolojia. Mety hijery ilay mitsangana tena samy hafa amin'ny 2030 araka ny orinasa sy ny matures evolves. Izany no mandika an kokoa karazana asa sy ny asa fa tsy afaka forecast in 2018.
Kraken Daily Market Report for 02.08.2018
$108M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
MJAC CRYPTO COMPARE LONDON. I C...